लकडाउन खुकुलो पारिदैँः पसल खुल्ने, सवारीमा जोर विजोर गरि सञ्चालन गरिने ! » देशपाटी
लकडाउन खुकुलो पारिदैँः पसल खुल्ने, सवारीमा जोर विजोर गरि सञ्चालन गरिने !
काठमाडौं । सरकारले लडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तर एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले धेरै कुरा भन्न गाह्रो छ, कुन क्षेत्र कसरी खुला गर्ने भनेर हामी भोलि विस्तृतमा सार्वजनिक गर्छौं ।’